Indawo: Ikhaya » Ukuthumela » Izwe | Isifunda » Austria » I-Austria yenza ukugonywa kwe-COVID-19 kube isibopho kuzo zonke izakhamizi
Njengoba uzoqala ukusebenza ngoFebhuwari 1, lo mthethosivivinywa uzodinga ukuthi wonke umuntu omdala wase-Austrian - ngaphandle kwabesifazane abakhulelwe noma labo abakhululekile ngenxa yezizathu zokwelashwa - ukuthi bagonyelwe i-Covid-19. Izinhlawulo zalabo abenqabayo zizoqala ukusetshenziswa kusukela maphakathi no-Mashi, futhi izakhamizi ezingayithobeli imithetho zizogcina zikhokhiswe inhlawulo ephakeme yama-euro angama-3,600 ($4,000).
Amalungu angu-137 ase-Austrian IPhalamende namuhla avotele ukuvumela ukuthi ukugomela i-COVID-19 kube yisibopho kuzo zonke izakhamizi zezwe. Amalungu ePhalamende angama-33 kuphela aphikisana nomthethosivivinywa.
Njengoba iningi labashayimthetho bezwe beseka lo mthetho omusha, lo mthethosivivinywa usubheke esigungwini esiphezulu sePhalamende lase-Austria ukuze kuxoxwe ngakho futhi kuvunywe.
Kusukela AustriaAmaqembu abusayo - umfelandawonye wenhlangano emaphakathi-kwesokudla iPeople's Party kanye neGreens - abamba iningi kuleli gumbi, ukuphasiswa komthethosivivinywa wokugoma okuphoqelekile kuqinisekisiwe.
Iqembu elingakwesokudla yilona lodwa iqembu elaphikisa igunya ephalamende.
Umthetho uzonika iziphathimandla zase-Austria amandla okugcina isizindalwazi sesimo sokugoma saso sonke isakhamuzi kanye nosuku lokuphelelwa yisikhathi kwalesi simo esishiwo, esingaseshwa yizikhulu. Lo mthetho uzosebenza kuze kube ngu-2024.
Ukugoma okuyisibopho kwahlongozwa okokuqala ngabakwa Austriauhulumeni emuva ngoNovemba, futhi isimemezelo saqala imibhikisho emikhulu. Ngaleso sikhathi, i-Austria yayinezinga eliphansi lokugoma eYurophu, esenyuke laya ngaphezu kwesilinganiso se-EU. Njengamanje, ngaphezudlwana kuka-70% wabantu base-Austrian bagonywe ngokugcwele, ngokwezibalo ze- I-World Health Organization (WHO).
Austria selusebenzise izinyathelo ezinqala kusukela ngoNovemba 2021 emzamweni wokunqanda ukusabalala kwegciwane le-COVID-19, nokho ngokusobala azikho ezike zasebenza.
Ngaphandle kokwethula ukuvalwa kwendawo kwabangagonyiwe kanye negunya likamaskandi ezweni lonke - kokubili okuphoqelelwe ngamaphoyisa kanye nezinhlawulo ezinzima - i-Austria iqophe amacala amaningi e-COVID-19 ngoLwesine kunanoma yisiphi isikhathi phakathi nobhubhane kuze kube manje.
Kodwa-ke, ukufa kwehle kakhulu kusukela ngoDisemba.
Austria Covid-19 Freedom Impilo Inhlangano iPhalamende World Health Organization